Uyilandela njani inkcazo ye-OnePlus 6T bukhoma | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Emva kokubhengeza umhla wokufayilisha ifowuni ngokusemthethweni, i-OnePlus yanyanzelwa lungisa umhla wokubonisa we-OnePlus 6T. Ekucwangcisweni kwasekuqaleni ngo-Okthobha u-30, umenzi waseTshayina kuye kwafuneka awutshintshe kuba iApple yaququzelela umsitho kwangolo suku, ngokungathandabuzekiyo eyayiza kubalasela kwifowuni yayo. Ekugqibeleni, Umhla wokugqibela wokungeniswa ngu-Okthobha 29, kusuku olungaphambi koko.
Umnyhadala wenkampani oza kwenzeka eNew York City, into ebonwa njengelinge lophawu lokungena kwintengiso yaseMelika nge-OnePlus 6T yayo. Inkampani ibhengeze ukuba kunokwenzeka ukulandela umcimbi ngqo, kwaye ngoku siyazi ukuba njani.
Njengoko bekulindelekile, Siza kuba nosasazo lwalo msitho bukhoma kwiYouTube. Yintoni eya kwenza ukuba kube mnandi ngokwenyani ukukwazi ukulandela umsitho bukhoma naphi na emhlabeni. Asiyi kuphoswa zinkcukacha ngale OnePlus 6T ngale ndlela. Uyabona ikhonkco elingezantsi.
Ukulindela kwesi sixhobo kuphezulu, ke kuya kuba ngumdla ukubona ukuba yintoni uphawu elugcinileyo. Kancinci kancinci sele sinazo iinkcukacha malunga nayo, njengoko izakufika ngePie ye-Android okanye iya kuba nomfundi ofunda iminwe odityaniswe kwiscreen.
Umnyhadala wentetho ye-OnePlus 6T uza kuqala nge-16: 00 pm (ixesha leSpanish). Ukususela ngeli xesha ukuya phambili siya kuba nakho ukulandela umboniso wale ndawo iphakamileyo kwisitishi se-YouTube sophawu lwesiTshayina. Kungenzeka ukuba iinkcukacha ezintsha malunga nesixhobo ziza kufika ngaphambi kwalo mhla.
Ngapha koko, ikhonkco esilinikeze apha ngasentla lelinye ekufuneka ulisebenzisile ukuze ukwazi ukulandela umboniso wale OnePlus 6T ngokusemthethweni. Ucinga ntoni ngesi sixhobo? Ufuna ukudibana naye?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ulandela njani umcimbi wokubonisa we-OnePlus 6T